Nadiifinta Zinedine Zidane Ee Santiago Bernabeu Oo Socota, Laba Maalmood Kadib Xarunta Tababarka Oo Uu Ku Soo Laabanayo Iyo Xogta Madrid Ee Ciyaartoyda La Dirayo. - Gool24.Net
Nadiifinta Zinedine Zidane Ee Santiago Bernabeu Oo Socota, Laba Maalmood Kadib Xarunta Tababarka Oo Uu Ku Soo Laabanayo Iyo Xogta Madrid Ee Ciyaartoyda La Dirayo.
Zinedine Zidane ayaan wax naxariis ah ka muujinayn ciyaartoyda uu doonayo in uu ka nadiifiyo Santiago Bernabeu isaga oo diyaar u ah in uu kooxda kula soo hadho nooca ciyaartoyda uu doonayo in ay qayb muhiim ah ka ciyaari doonaan qorshihiisa xili ciyaareedka cusub.
Real Madrid ayaa haddaba lacag badan ka urursanaysa ciyaartoyda kooxdeeda ka baxaya waxaana jira xidigo amaah ay lacag ka helayso kooxo kala duwan loogu diray.
Laba maalmood oo kaliya ayaa ka hadhsan waqtiga ay Zidane iyo ciyaartoyda kooxdiisa Madrid dib ugu soo laabanayaan xarunta tababarka ee Valdebebas iyada jadwalka soo laabasho ee ciyaartoyda Madrid uu yahay July 8 waxayna isniinta ka duuli doonaan Madrid si ay ugu jihaystaan Montreal.
Maalmihii ugu danbeeyay waxay Real Madrid ku guulaysatay in ay shan ciyaartoy kooxdeeda iib ama amaah kaga dirtay iyada oo Marcos Llorente uu 40 milyan yuro ugu wareegay kooxda Atletico Madrid.
Kadib Real Madrid ayaa 45 milyan yuro kale waxay Chelsea kaga iibisay xidiga amaahda kula joogay ee Mateo Kovacic halka Raul de Romas uu isna 20 milyan yuro ugu biiray kooxda Benfica.
Real Madrid ayaa shalay amaah ku bixisay difaaca bidix ee Sergio Reguilon kaas oo kooxda Sevilla ku soo qaadan doona xili ciyaareedka cusub iyo waliba Martin Odegaard oo isna amaah hal xili ciyaareed ah loogu diray kooxda Real Sociedad.
Xidigaha Real Madrid ka baxayaa ayaa noqon doona Theo Hernandez kaas oo 20 milyan yuro ugu biiray AC Milan halka Dani Ceballos uu isna ku dhaw yahay kooxaha Premier League iyada oo Tottenham hadda tartankiisa hogaanka u haysa.
Laakiin Zidane iyo maamulka Madrid ayaa rajaynaya in muddada ka horaysa Isniinta inta ayna Madrid ka duulin ay xal u helaan Keylor Navas, Jesus Vallejo, Isco, Gareth Bale, James Rodriguez iyo Lucas Vazquez kusaas oo aan dhamaantood qayb ka ahayn qorshaha Zidane.
Arsenal ayaa ku dhaw in ay dhamaystirto heshiiska Lucas Vazquez iyada oo 31 milyan ka bixinaysa waxayna guud ahaan Real Madrid lacag aad u badan ka helaysaa ciyaartoyda uu Zidane ka nadiifinayo Madrid.
Laakiin Real Madrid ayaa doonaysa in ay lacagan dib ugu kharash garayso heshiiska ay ku doonayaan Pual Pogba iyada oo haddaba uu jiro war sheegaya in ay Man United u direen dalab 72 milyan gini ah oo lagu daray Bale ama Isco.
Iyada oo laba maalmood ka hadhsan yihiin waqtiga uu Zidane dib ugu soo laabanayo xarunta tababarka kooxdiisa, waxaa si wayn loo sugayaa in waqtiyada soo socda ay Madrid sii wadi doono nadiifinta kooxdeeda.